Xeerka Caymiska Jirrada iyo Cudurka Kaankarada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mats Boman.Sawirle: Mari Forssblad/SR.
Xeerka Caymiska Jirrada iyo Cudurka Kaankarada
Publicerat onsdag 18 maj 2011 kl 10.22
Inkasta oo dawladda dalka ka talisaa wax ka badashay, sahashayna shuruucda caymiska dhaqaale ee dadyoowga u il-daran cudurka kaankarada ama kansarka ayey haddana qaar ka mid ah dadyoowgaa aaney helin xuquuqdoodii. Mats Boman, una liita cudurka kaankarada ee afka ku dhaca ayaa laga dhimay dhaqaalihii caymiska, isaga oo lagu wado ka daweeyntii cudurka.
– Wax badan afka ma kala qaadi karo. Waxaa la igu sameeyey gubniin afka si la iiga daweeyo cudurka, iyadoona aanan bilowgii afka aanan waxba ka qaadan karinin, sida uu sheegay Mats Boman.
14 maalmood dabadeed kolkii Matas Boman lagu hayay daweeyn looga daweeynayay saddex buro kaankaro ee afka ka soo baxey ayaa 5 boqolkii laga jaray dhaqaalihii ceeymiska ee uu qaadan jiray iyadoona la gaarsiiyay 75%.. Waxaana uu Mats Boman iminka ku nool yahay oo keliya 2500 oo koron bishii.
Gacan yaraha hayadda ceeymiska qaranka ee Mats Boman ayaan la socodsiin inuu xaq u leeyahay inuu dhaqaalhiisii hore qaato una baahan yahay inuu buuxiyo foom ka duwan kii hore. Caqabadan ayaa markii dibadda la soo dhigay ay sheegtay Kristina Hylén Bengtsson madaxa waaxda dhaqaalaha ceeymiska ee dadyoowga xanuusan iney amuurtaa ka fiirsan doonaan sidii wax looga bedeli lahaa.
– Waa xaalad u baahan in wax laga qabto. Sida caadiga ah waxaan ku dhiiri-gelinaa suurtagallada jira, maadaama muddada ceeymisku tahay mid xaddidan, sida ay sheegtay Kristina Hylén Bengtsson.
Mats Boman ayaa iminka xaq u leh inuu abiil ka qaato xaaladdiisa.